Phycocyanin Powder Price, Badeecad ka socota Bolise
[Faahfaahinta] 18 midab Qiime
[Isha dhirta] Spirulina
[Muuqaalka] Budada Buluugga ah
[Waxqabadka iyo adeegsiga]
1. Phycocyanin waa midab biyo-ku milma, ma aha sun, buluug saafi ah, dhalaalaya oo qurux badan, waxaana loo isticmaali karaa in lagu daro waxyaabaha cuntada lagu qurxiyo iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
2. Phycocyanin wuxuu jaangoyn karaa habka difaaca jirka aadanaha, wuxuu sare u qaadi karaa shaqada nidaamka difaaca jirka, wuxuuna hagaajin karaa iska caabinta jirrada ee cudurrada.
3. Phycocyanin waa buluug iyo dhaldhalaal, waxaana loo isticmaali karaa reagent ahaan qaar ka mid ah cilmi baarista sawir-qaadashada ee biology iyo cytology.
Codsiga budada Phycocyanin
1.Waxaa lagu dhajiyay midabka cuntada dabiiciga ah;
2.Waxaa lagu codsanayaa qaybta dawooyinka;
3.Tababaray berrinka la isku qurxiyo;
Ku saabsan budada Phycocyanin
Phycocyanin waa mid ka mid ah midabbada dhifka ah ee dabiiciga ah. Ma aha oo kaliya midab dhalaalaya, laakiin sidoo kale borotiin nafaqo leh. Waxyaabaha ay ka kooban tahay amino acid-ka ayaa dhameystiran muhiimadda amino acid-keeduna waa mid sarreysa.
Phycocyanin wuxuu leeyahay shaqooyinka ka hortagga kansarka, kor u qaadida dib u soo nooleynta unugyada dhiigga, dayactirka ugxan sidaha iyo dhiirrigelinta isku-darka elastin ee jirka aadanaha.